အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 150
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ စစ်မက်တွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရပ်မှာ အဲဒီအချစ် ရှင်သန်လာခဲ့တယ် …။ ကလေးကလားဆန်တယ် ပြောရင်လည်း ဒီက အပြုံးနဲ့ ခံယူဖို့အသင့်ပါ … မင်းလည်း သူ့ကြောင့် မင်းဖြစ်လာခဲ့ ငါလည်း သူ့ကြောင့် ငါဖြစ်လာခဲ့တယ်။ စကားတွေ တလှေကြီးပြောခဲ့ပြီး အဲဒီ တလှေကြီးထဲက စကားလုံးတွေတိုင်းဟာ အချစ်လောက် လက်တွေ့မကျခဲ့ပါဘူး။ လူကို လူက ယူသွားတယ် လူကို ငွေက ယူသွားတယ် လူကို အကြောက်တရားက ယူသွားတယ် လူကို သစ္စာမဲ့မှုက ယူသွားတယ် လူကို သုံးစားမရတဲ့ခေတ်က ယူသွားတယ် လူကို …။ ငါက ငါ့ဘ၀ကို မင့်နောက်လိုက်အဖြစ် ကျင့်သားရခဲ့ပြီးမှ မင်းက ဦးဆောင်သူအဖြစ်ကနေ ဒူးထောက် အညံ့ခံသွားတယ် အဲဒီ...
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ ဘ၀ရဲ့ ပြဌာန်းချက် သူမ ခုခံပစ်ခတ်နေတဲ့ ကျည် သေမင်းရဲ့ အငွေ့အသက်မှာ ပါးပြင်ပေါ်က ရနံ့ကိုရစေ …။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ သွေးဥနေတဲ့ ခြေဖ၀ါးမဟုတ်ဘူး သွေးစိမ်းရှင်ရှင် စိမ့်ယို စီးဆင်းနေတာ …။ မြေသားက ဖုံးကွယ်ထားပေးတယ် ခက်မြ ကြမ်းရှ ကျောက်စိုင်တွေက အတူနေ လက်တွေ့ဘ၀တွေပဲ …။ ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်အရိုက်ခံရတဲ့ညတွေမှာ အရှိုးရာ တပြပြနဲ့ … မျက်ရည်ကျဖို့ ဝေးစွ။ တဆစ်ဆစ်နဲ့ … ဝေဒနာကို မမွေးဘူး ဒဏ်ရာကျက်ရင် … အပွင့် အခက် ရွက်နုကလေးတွေ ဝေစေမယ်။ ဒါ …. ယုံကြည်ချက် … လမ်း အလွမ်း … သူလည်းပါတယ်လေ …။ ။ No tags for this post. Related posts...
ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ ရင်လေးသတဲ့လား …
ဖိုးထက် စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ကိုချို့အသက်က ၄၉ နှစ် တင်းတင်း ပြည့်သွားခဲ့ပြီ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံလေး၏ ချန်ဂီလေယာဉ်ကွင်း Maintenance လုပ်ရသည့်ကုမ္ပဏီမှာ ကိုချိုက Senior Technical Officer။ သူ့ကုမ္ပဏီက အခုခေတ်လူငယ်စကားနှင့်ပြောရလျှင် ခိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီကြီး။ ဒီအလုပ်ကို ပြောင်းတာ မကြာ သေးပေမယ့် သူ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်များကို အင်တာဗျူးအပြီးမှာ နည်းနည်းနေရာရဖို့ခက်သော စီနီယာဆိုသည့် ရာ ထူးကို ရထားသည်။ ပြီးတော့ ကိုချိုက စင်္ကာပူ PR (permanent resident)။ ကိုချိုစင်္ကာပူကို စရောက်ခါစက ခေတ်ကောင်းချိန်လို့ပြောရမလား။ ခွေးအမြီးဖြတ်ပြီးခေါ်သွားလျှင်တောင် PR ချပေးသည့်ခေတ်ဟု အပမာနပြောကြသလို ခေတ်ကြီး။ ကိုချို့အတွက်ကတော့ PR ဖြစ်ဖြစ်၊ WP ဖြစ်ဖြစ်၊ စီတီဇင်ဖြစ်ဖြစ်...
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ စစ်ပွဲတွေကို .. ခင်ဗျားခံစားချင်တဲ့ အသားတဖတ်နဲ့ လဲလို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျား ရပ်ချင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရပ်ပစ်လို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျားရဲ့ ရွှေပြည်အေးတရားနဲ့ တားဆီးလို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျားရဲ့ ရန်သူ့ သွားကြားထိုးသံနဲ့ ငြိမ်းအေးလို့ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို အဲဒီလို ကလေးမလေးတွေရဲ့ အပျိုရည်ပျက်မှုတွေနဲ့ လဲလှယ်လို့ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ….. ။ ။ (၀င်းမော်ဦး ကျဆုံးတဲ့နေ့မှာ ရေးတယ်) No tags for this post. Related posts No related posts.
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ငွေတမတ်နဲ့ ချေဂွေဗါးရား ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ မဟာဗန္ဓုလ ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ ဧကရာဇ်မင်းတပါးလည်း ဖြစ်ခဲ့ ငွေတမတ်နဲ့ …။ အဲဒီ ငွေတမတ်နဲ့ ငါးကြင်းခေါင်းကိုင်ရတဲ့ အိပ်မက် ခလေးဆိုတော့ မက် မတတ်ခဲ့ဘူး …။ ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲ တမတ်တန် ကပ်ခွာကလေးများ လက်ဖ၀ါးပေါ်က အရှိုးရာများနဲ့ လဲခဲ့တယ် …။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
တူမောင်ညို၊ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွယ်လွန်သူ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဘဘ ဦးရွှေအုံး (၁၉၂၃- ၂၀၁၀) ကို အောက်မေ့ သတိရလို့ ဒီလိုခေါင်းစဉ် တတ်လိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရွှေအုံး ၁၉၉၃ အမျိုးသားညီလာခံ (ကျိုက္ကဆံ) သို့ တင်ပြတဲ့ စာတမ်းအမည်က “တတိယ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သို့ (ဘယ်တော့ ဘာကြောင့် ဘယ်လို)”ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချုပ် ပြောတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုတာ “လာမယ် – ကြာမယ်- မျှော်”ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးထင်ပါတယ်။ ဒီချုပ် မှာ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ၊ ညီလာခံခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတော့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်အတွက် အလှည့်မကျနိုင်သေးဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း...
ဖိုးထက် စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ အမည်မည်း၊ အမည်ဖြူ ကိစ္စများ ၊ “ပြည်သူတွေ မြှောက်စားလို့ တောက်ကြွားရမယ့် မင်းသားလေးပါခင်ည” ဆိုသည့် ဟန်ပန်အမူအရာများဖြင့် ကားပေါ်တက်ကခုန်နေကြသော အချိန်အခါသမယကြီးမှာ ကျနော် ခွင့်တစ်ပတ်ရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်ပြန်သွားခဲ့သည်။ အိမ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း ဆွေမျိုးအရင်းကြီးတွေဆီဖုန်းဆက်မှ ဘယ်အချိန်ကတည်းက အမည်မည်းဖြစ်နေခဲ့ရှာဟန် မသိသည့် အမတစ်ယောက်က “အေးဟယ် ငါလဲခုမှသိရတော့တယ်” ဟုပြောလာသည်။ သံချည်းတက်အရောင်များ၊ ဖုန်အလိမ်းလိမ်းတက်၊ ရေညှိတွေ မင်းမူနေသောဆိုင်းဘုတ်များ၊ မရွှင်လန်း မတက်ကြွသော မျက်နှာများ၊ အစီ အစဉ်မကျနမှုများကြားမှာ ဘာတွေများပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုသည့်အသိနှင့် သတိထားကြည့်မိသည်။ နတ်ရေကန်ထဲ ပြစ်ချသလိုပြောင်းလဲ စေချင်သော၊ မျက်လှည့်ပြသလို အပ်ချလောင်းဆိုပြီး ပြောင်းလဲစေချင်သော ကျနော့်အတွက် အားမရတာတော့အမှန်။ အထက်စီး၊ အပေါ်စီး ကမကြည့်ဖြစ်ဘဲ အားမလို၊ အားမရဖြစ်ခြင်း၊...
Page 150 of 156«1...148149150151152...156»